TRENDING : #नेपाल
#नेपाली राजदूतावास युएइ
रिपोर्टर्स नेपाल, ४ असोज । नेपाल ! नेपाल ! नेपाल ! सँसारको अग्लो भवन बुर्ज खालिफामा नेपाली झण्डा झलमलाउँदा नेपालीहरु खुशीले भन्न थाले । गइराति
जब सँसारको अग्लो भवन बुर्ज खालिफामा नेपाली झण्डा झलमलाउनेछ
काठमाडौं, ३ असोज । सँसारको अग्लो भवन बुर्ज खालिफा । यसलाई हेर्ने चाहना र उत्सुकता कसमा नहोला । रातको समयमा भवनमा झलमलाइने वत्तीको विशेष महत्व छ । त्यसैले मरभूमिमा बनेको
लण्डन राज्य समितिको उपाध्यक्षमा लालबहादुर गुरुङ बलियो दाबेदार
काठमाण्डौ । स्याङ्जाका लालबहादुर गुरुङले एनआरएन इङल्यान्ड राज्य परिषदको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् । आगामी सेप्टेम्बर १४ मा हुने चुनावमा गुरुङले उम्मेदवारी दिन लागेका हुन् । एनआरएन बेलायतको अध्यक्षका
चैत ५, काठमाण्डौ । नेपालको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवनअन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक हजारौं मानिसहरुको भिडभाड देखिन्छ । त्यो भिडभाड विदेशबाट आएका आफ्ना आफन्तहरु लिन गएकाहरु भन्दा रोजगारकिो लागि विभिन्न मुलुक जानेहरुको
अमेरिका जाने नेपालीले जान्नै पर्ने कुराहरु (भिडियोसहित)
फागुन १८, काठमाण्डौ । अमेरिकी अध्यागमनसम्बन्धी कानुनका ज्ञाता बासुदेव फुलाराले नेपाल सरकारले अमेरिका जाने नेपालीहरुको तथ्याङ्कसमेत नराखेको खुलासा गरेका छन् । नेपालबाट अमेरिका जाने नेपालीहरुले धेरै दुःख पाउने गरेको पनि
मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी पोर्चुगलको प्रथम बिस्तारित भेला सम्पन्न, अध्यक्षमा रिजाल
मोहन कार्की : युरोप, १० मंसिर । मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी पोर्चुगलको प्रथम बिस्तारित भेला सम्पन्न भएको छ । “सबैकालागि खेलकुद” भन्ने मूल नाराकासाथ पोर्तुगलका नेपाली युवाहरुमा खेलकुदको माध्यमबाट विकास
२७ गते अमेरिकाको भर्जिनियामा दशैँ विशेष कार्यक्रम गरिँदै, राष्ट्रिय कलाकारहरु पनि जाने
असोज २५, अमेरिका । चाडपर्व नजिकिएसँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरुले विभिन्न सांगितिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गर्ने क्रम बढेको छ । वडा दशैंको अवसरमा अमेरिकाको भर्जिनियामा के सी डान्स सेन्टरले शुभकामना आदान
असोज ३, काठमाडौं । मलेसियामा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुने नेपालीको संख्या ६ पुगेको छ । अन्य १७ जना नेपाली गम्भीर बिरामी परेका छन् । सुनगाई बुलोच अस्पतालमा पाँच जनाको
काठमाण्डौ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शून्य लागतमा कामदार पठाउनका लागि सरकारी संयन्त्र तयार गरी कामदारको छनौट र आपूर्तिको व्यवस्था गर्न कतारसमक्ष प्रस्ताव राखेको छ । वैदेशिक रोजगार
चौतारा, २१ साउन । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका– ५ मार्मिङका एउटै घरका चार जनासम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएको भेटिएको छ । नेपाल सरकारले खुला नगरे पनि भारतको बाटो भएर यहाँका २४७ जना
काठमाडौं, २१ साउन । चार बर्षअघि पहिलो पटक नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा चर्चा पाएका थिए। उनको राजनितिक जिवन र नेपाली धर्म पुत्रको रुपमा उनले सार्वजनिक
फर्कीए प्रेम बहाद्र
काठमाडौँ, २१ साउन । लामो समयदेखी साउदी अरबको जेलमा रहेका प्रेम बहाद्र राई नेपाल फर्कीएका छन। पीडापछिको खुशी बोकेर इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर ४ का प्रेम बहादुर राई आइतबार
काठमाडौं, ६ असोज । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्षमण्डलको संयोजकको जिम्मेवारी महन्थ ठाकुरले सम्हालेका
काठमाडौं, ६ असोज । बहुप्रतिक्षित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।